महिलाले किन देब्रे नाक मात्रै छेड्ने गर्दछन् ?
काठमाडौँ । पछिल्लो समय केही युवतीहरु किन नाक छेड्न पर्र्यो भन्ने प्रश्न गर्छन् । अधिंकाशलाई नाक किन छेडिन्छ यसबारे पनि कमैलाई थाहा छ ।
राति ब्युँझिनुभयो ? होस् गर्नुहोस यस्ता काम गर्नुहुँदैन
यसकारण नियमित पुदिना चिया खानुपर्छ
'काउलीले क्यान्सरबाट बचाउन पनि सहयोग गर्छ'
सम्बन्ध टुट्दैछ भने, खुसी हुँदै गर्नुहोस ब्रेकअप ताकि...
एजेन्सी । भन्नमा सजिलो छ कि राजीखुसी ब्रेकअप हुन सक्छ, तर यस्तो हुन मुश्किल हुन्छ । सम्बन्धमा रहेका प्रेमी–प्रेमिकाबीच ब्रेकअप हुँदा जोकोहीलाई पनि पिडा हुन्छ ।
हात फुट्नबाट जोगाउन...
काठमाडौं । दूध र सुन्तलाको रससँग मह मिसाएर मोस्चराइजर बनाउन सकिन्छ । यसको प्रयोगले छालामा भएको पानी सोस्ने ब्याक्टेरिया हटाएर त्यहाँको सुख्खापन कम गर्छ ।
भगवानलाई हरेक ठाउँमा देख्न सकिँदैन तर अनुभव गर्न सकिन्छ
काठमाडौं । प्रचलित पुरानो लोक कथाका अनुसार एकदिन भारतको महाराष्ट्रका प्रसिद्ध सन्त नामदेव आश्रममा आफ्ना शिष्यहरुलाई प्रवचन दिँदै थिए । उनी भक्ति तथा ज्ञानको महत्व सम्झाइरहेका थिए ।
ग्यास्ट्रिकको सजिलो उपचार !
काठमाडौं । पेटमा हल्का जलन हुनुदेखी लिएर एकदमै पिडा दिनेसम्म ग्यासको असर हुने गर्छ । ग्यास्ट्रिकले लगभग हरेक व्यक्तिलाई सताउँछ । यसबाट कैयौं नेपालीहरु पीडित छन् । हाम्रो खानपानले गर्दा पनि पेटमा ग्यास जम्मा हुने गर्छ ।
जम्मा ६ दिनमै पेटको बोसो घटाउन...